« Tolo-tanana ho an’i Fanaiky »: mifanentana ireo mpanakanto namany | NewsMada
« Tolo-tanana ho an’i Fanaiky »: mifanentana ireo mpanakanto namany
Avy hatrany dia hetsika! Taorian’ny antso avo nataon’ny tarika Solomiral, sady nisolo tena ny fianakaviany, nifanentana ireo mpanakanto maro naman’i Fanaiky. Fantatra izao fa efa misy seho vitsivitsy ho fanangonam-bola, karakarain’izy ireo, amin’ity herinandro ity.
Hanomboka izany ny etsy amin’ny Trass Tsiadana, ny alakamisy 13 septambra izao, manomboka amin’ny 8 ora alina. Hifampizara sehatra ao ireo mpanakanto, ahitana mpihira sy mpitendry isan-tsokajiny, toa an-dry Samy Andriamanoro, Lalah Rakotorahalahy, Josia, Andry Michael, Joro rakotozafiarison, Faniha, Sanda Ranaivosoa, Nini, Harty Andriambelo, sns.
Hitohy ny asabotsy ny hetsika, etsy amin’ny Piment Café Behoririka. Manome fotoana ao ireo mpitendry gitara beso naman’ i Fanaiky, toa an-dry Rolf, Harty Andriambelo, Mikakely, Désiré Razafindrazaka, Nully, Tonny Mahefa, sns.
Hitohy eny amin’ny No Comment Bar Isoraka kosa izany, ny alahady 16 septambra, iarahana amin-dry Sanda Ranaivosoa, faniah, Steph Ramb, Elsie, Imiangaly, zara, Kiady, Désiré sy Andy Razafindazaka, Rado Manantsoa, Solo Andrianasolo, sns.
Fanombohana ihany ireo fa mbola hisy ny hetsika manaraka ho avy. Ankoatra izay, afaka mandefa izay foiny amin’ny alalan’ny kaonty BFV: 00008 00007 05001280396 43 amin’ny anaran-dRasolomalala Mirenty Fitia Fanandratra (Zanaka vavin’i Fanaiky), na amin’ny Orange money : 032 07 904 56 (Fanaiky) sy M-Vola : 034 66 619 66 (Fanaiky), na amin’ny Western Union amin’ny anaran-dRabemiaramanana R.hajarisoa Lalaina (Vadin’i Fanaiky) ny rehetra.